Amb Tarsan oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Kulamo u socda Madaxda Qaranka Somalia. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Amb Tarsan oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Kulamo u socda Madaxda Qaranka Somalia.
February 17, 2019 - By: Mohamud Nadif
Amb Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Dalka Kenya ayaa saaka dib ugu soo laabtay Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ka dib markii Dawlada Kenya ku amartay in uu dib ugu laabto dalkiisa, Amb Tarsan ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyay Marwada koowaad ee Madaxweynaha Dalka Marwo Seynab oo ku sugnayd Magaalada Nairobi iyo Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagu kasoo laabtay Dalka Sweden.
Xiriirka diblumaasiyadeed ee Somalia iyo Kenya ayaa xumaaday iyadoo kenyana ay u yeeratay safiirkeedii ka joogay Magaalada Muqdisho, arinta xiisada abuurtay ayaa ku salaysan muran xaga badda ah oo u dhaxeeya labada wadan, Kenya ayaana Somalia ku eedaysan in ay xaraash geysay khayraad ay iyadu leedahay, Dawlada Somalia ayaa iyaduna weli ka jawaabin talaabadaas ay kenya qaaday.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xarunta Madaxtooyada ee Soomaaliya uu kulan uga socdo Madaxda Qaranka oo ku jiro safiirkii Soomaaliya ee Kenya u fadhiyay iyo wasiirka Arimaha dibadda, sidoo kale waxaa qayb ka ah kulanka la taliyayaal sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo raisal wasaaraha.